CEPRAD » BAAQ NABADEED – Dagaalka Magaalada Guri-Ceel
by Abdishakur Hassan
Taariikh: 12ka Febraayo, 2015
Muqdisho (CEPRAC Consultancy) – Xarunta la talinta CEPRAD ee arimana Nabada, Cilmi-baadhista iyo Horumarka, waxay baaq nabadeed u diraysaa dhinacyada ku dagaalamay magaalada Guri-ceel ee gobolka Galguduud. CEPRAD Consultancy waxa ay ku baaqaysaa joojinta dagaalada labadii maalmood ee u dambeeyey ka dhacay magaalada, waxa aan aad uga xunahay dirirta ka dhacday Guri-Ceel.
Waxaan ugu baaqanynaa dhinacyada dagaalku dhexmaray Gurri-Ceel in wadahadal lagu soo dabaalo xal u helista ismaandhaafka sababay dirirta. Dagaaladan labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday degmadaas ayaa keeni kara dhibaato balaadhan hadaan lagu soo dabaalin wada-hadal in lagu dhameeyo ismaandhaafka siyaasadeed.
Colaad wiil ayaa ku dhinta wiil kuma dhasho ! wiilka inaga baxayaana waa xubin muhiim u ah bulshada Somaliyeed horumarkeeda, nabadeeda, iyo daboolida baahiyaheeda kala duwan ka baxday. Kala duwanaanshaha aragtiyeed, higsi, doonis, fikir, damac waa quruxda nolosha macquulna ma aha in wax kasta lagu midaysnaan karo. Waxaa lagama maarmaan ah in kala duwanaanshahaa la aqbalo isla markaana lagu soo bandhigo si nabdoon oo aan qoriga iyo xabadu noqon xal.
Waxaan mar kale soo jeedinaynaa in la joojiyo dagaalada arrintana wada hadal ay kusoo dabaalaan dhinacyada dagaalamay. CEPRAD waxay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato dedaalada nabad loogu soo dabaalayo deegaanka.
MAHADI ALLE AYAY U SUGNAATAY